Yan Aung: June 2007
Posted By Yan 15 Comments
Posted By Yan 20 Comments
Online မှာ လျှောက်ရှာကြည့်နေရင်းနဲ့ ဒီ Ebook လေးကို တွေ့လို့ Download လုပ်ထားလိုက်ပါတယ်. အားလုံးဖတ်ရှုနိုင်အောင် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ.
Napolean Hill ရဲ့ Think and Grow Rich ပါ. သိပ်ကိုကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့ တက်ကျမ်းစာအုပ်တစ်အုပ်ပါပဲ. ဒီစာအုပ်ကို ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်းက အကြံဥာဏ် ဖြင့်ကြီးပွားရေး ဆိုပြီး ဘာသာပြန်စာအုပ်ထုတ်ဝေခဲ့ဖူးပါတယ်. အားလုံးပဲ ဖတ်ရှုလေ့လာမှတ်သားပြီး ကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေ ခင်ဗျာ…
Posted By Yan 21 Comments
ငါ့ဘေးနားမှာ တတီတီနဲ့ မြည်နေတဲ့ နှိုးစက်တစ်လုံးက
မင်းရဲ့ စိတ်ဓာတ်အင်အားတွေ နည်းနေပြီလားလို့ ငါ့ကို စိုက်ကြည့်ပြီးမေးနေတယ်
မျက်စိကို ပြန်မှိတ်ပြီး ပက်လက်ပြန်လှဲလိုက်တယ်.
မျက်နှာကြက်မှာ ဖန်မီးအိမ်တစ်လုံးက လေနဲ့အတူ ဝေ့၀ဲလို့
ငါ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာ လက်ကလေးနှစ်ဖက်ကို ယှက်ထားလို့
ငါဆုတောင်းဖို့ ရှက်တယ်ဆိုတာ မင်းလည်း သိပါတယ်
ငါလိုချင်တာကို ငါ့နည်းငါ့ဟန်နဲ့ပဲ ယူချင်တယ်
ငါ့စိတ်ကိုပဲ autosuggestion လုပ်တယ်.
ငါ့ဖုန်းထဲမှာ မင်းထားခဲ့တဲ့ Voice Mail တွေကို အကြိမ်ကြိမ်နားထောင်လို့
ငါ့မေးလ်ဘောက်စ်ထဲမှာ မင်းပို့ခဲ့တဲ့ စာတစ်ချို့ကို အကြိမ်ကြိမ်ပြန်ဖတ်လို့
ငါ့နှလုံးသားထဲမှာ အကျအနထိုင်နေတဲ့ မင်းကိုအကြိမ်ကြိမ်ပြုံးပြလို့
ရင်ဘတ်ထဲက လှိုင်းတွေကို လမ်းလွှဲပေးလိုက်တယ်
ငါ့ရဲ့ မျက်တောင်တွေ စိုနေပါရော့လား…
အင်အားတစ်ချို့က ငါ့ကို မနေနိုင်အောင် မောင်းထုတ်ကြတယ်လေ
မင်းကိုသိပ်ချစ်တဲ့ နှလုံးသားတစ်စုံကို သိမ်းထုပ်လို့
နေမင်းရဲ့ အလင်းတန်းတွေ မရုပ်သိမ်းခင်
အပြစ်ကင်းစင်စွာနဲ့ ၀မ်းနည်းနေရတာက ပိုမြတ်ပါတယ်
ငါသိပ်ချစ်တဲ့ မင်းရဲ့အရိပ်လေးအောက်မှာပဲ သေချင်တယ်.
ကြယ်လေးတွေ ညကောင်းကင်ရဲ့ ကင်းဗတ်စပေါ်မှာ
နားထဲကို နတ်စောင်းတူရိယာသံလေးတွေ စီးဝင်လာသလိုပဲနော်.
အိုဒီးစီးယပ်စ်ရဲ့ စွန့်စားခန်းတွေ အသက်ဝင်လာတာကို
မမှိတ်မသုန် ရင်ခုန်စွာနဲ့ နားစွင့်နေခဲ့မိတယ်…
ကိုယ်သိပ်ချစ်တဲ့ မေပယ်လ်ပင်လေးအောက်မှာ လှဲအိပ်နေခဲ့မိတယ်.
ကိုယ့်ပါးပေါ်ကို သစ်ရွက်ငယ်လေးတွေ ကြွေကျနေတာပေါ့
ကိုယ့်ပါးပြင်ရဲ့ ဘယ်နေရာကို လာမှန်မလဲဆိုတာ
ဗန်ဂိုးရဲ့ ကြယ်တွေ တော်တော်စုံနေပြီ.
ဗန်ဂိုးနဲ့ဟိုးမားတို့ မှောင်ရိပ်ထဲကနေ ပြုံးပြီးကြည့်နေကြတယ်သိလား
တကယ်လို့များ ကျွန်တော်တို့ အခု ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုံးနေတဲ့ ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့ ယူနီကုတ်ဒ် စနစ်ကို Commercial License လုပ်ပစ်လိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မြန်မာဘလော့ဂါလောကကို ဘယ်လို သက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်မလဲ.
ဒါအစမ်းမေးတာ မဟုတ်ပါဘူးနော်. တကယ်ဖြစ်လာနိုင်ချေ ရှိနေလို့ပါ. ဘာလို့လဲဆိုတော့ အရင်တုန်းက Mandalayalpha.com မှာ ဇော်ဂျီဖောင့်ကို Download ပေးလုပ်ထားတယ်. ခုမရှိတော့ဘူး. နောက်ပြီးတော့ Seminar တစ်ခုမှာလည်း MandalayAlpha ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူတစ်ဦးက ဇော်ဂျီဖောင့်ကို License နဲ့ ထားဖို့ စဉ်းစားနေကြောင်း အရိပ်အမြွက် ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်.
ဒီတိုင်းပဲ သုံးလို့ရနေတာပဲလို့ ပြောချင်လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်. ဒါပေမယ့် လွတ်လပ်စွာရေးသားဆွေးနွေးနေတဲ့ မြန်မာဘလော့ဂါတွေအပေါ်ကို နိုင်ကွက် တစ်ခုအနေနဲ့ တစ်ဦးတစ်ယောက်က ချုပ်ကိုင်ထားနိုင်မယ့် အဖြစ်မျိုးကို မဖြစ်စေသင့်ဘူးလို့ ကျွန်တော်တို့ ယူဆမိတယ်.
ဒီလိုအကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့ စိတ်တူကိုယ်တူ ပညာ ရည်ချွန်တဲ့ မြန်မာဘလော့ဂါများ စုပေါင်းပြီးတော့ မြန်မာဘလော့ဂါများမူပိုင် မြန်မာဖောင့်တစ်ခုနဲ့ ယူနီကုတ်ဒ်စနစ်ကို တီထွင်ဖို့ စဉ်းစားမိပါတယ်.
ဒီအကြံကို ရရချင်းပဲ နီးစပ်ရာ ဘလော့ဂါမိတ်ဆွေများကို စတင်ဆွေးနွေး ပြောဆိုကြည့်ပါတယ်.
မပန်ဒိုရာ၊ မဂျစ်တူး၊ မအိမ့်ချမ်းမြေ့၊ ဘာညာတို့က ချက်ချင်းပဲ ငွေအားလူအား ကူညီမယ်လို့ ၀မ်းပန်းတသာ ပြောပါတယ်. ကိုမင်းကျော်ကလည်း ပညာအားပါ စိုက်မယ်လို့ အားတက်သရော ဆိုလာပါတယ်. မြန်မာဘလော့ဂါဖိုရမ်မှာတောင် ဒီနေ့ပဲ ယူနီကုတ်ဒ်တွေ အကြောင်း သူဆွေးနွေးထားပါတယ်. အဲဒါကို ဒီပို့စ်ရဲ့အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်..
မြန်မာယူနီကုတ်ဒ်ကို တီထွင်ဖို့က လွယ်သလားဆိုတော့ သိပ်မလွယ်ပါဘူး. ခက်သလားမေးရအောင်လည်း အဲလောက်မခက်ပါဘူး. ပညာစွမ်းနဲ့ အချိန်ကာလ အထိုက်အသင့်လိုပါတယ်. ငွေအားကိုတော့ ကျွန်တော်အပါအ၀င် ပြည်တွင်းပြည်ပက မြန်မာဘလော့ဂါများက ကူညီပံ့ပိုးပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်.
ပညာရည်ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ မြန်မာဘလော့ဂါတစ်ချို့ကို ကျွန်တော်လိုက်လံ စည်းရုံးဆွေးနွေးပါဦးမယ်
ခုတော့ ကျွန်တော်တို့မှာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ပျော့ကွက်တစ်ခုကို သတိပြုမိစေချင်လို့ ဒီပို့စ်လေးရေးပြီး သံချောင်းခေါက်လိုက်ပါတယ်.
ယူနီကုတ်ဒ်နဲ့ မြန်မာဖောင့်အတွက် လောလောဆယ် ကျွန်တော်စဉ်းစားမိထားတဲ့ မြန်မာ ဘလော့ဂါများကတော့
ဒါကျွန်တော်လက်လှမ်းမီသလောက်ပါ. ကျွန်တော့်ရဲ့ မိတ်ဆွေဘလော့ဂါများ ကိုလည်း ထပ်မံစည်းရုံးကြည့်ပါဦးမယ်. ကိုညီလင်းဆက်ကတော့ ဖောင့်တစ်ခုတီထွင်တာ ခရီးတော်တော်ရောက်နေပြီလို့ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ တစ်ချို့က တစ်ဆင့် ပြန်လည်ကြားသိရပါတယ်. အသေးစိတ်ကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားပါမယ်.
အထူးသဖြင့် ဖောင့်တီထွင်နေတဲ့ ကိုညီလင်းဆက်၊ ယူနီကုတ်ဒ်အကြောင်း ပြောပြဆွေးနွေးပေးတဲ့ ကိုမင်းကျော်၊ မြန်မာဘလော့ဂါများမူပိုင် ယူနီကုတ်ဒ်တစ်ခု တီထွင်သင့်ကြောင်း အကြံပြုဆွေးနွေးတဲ့ ဘာညာတို့ကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.
ပညာအား၊ လူအား၊ ငွေအား အကူအညီပေးဖို့ စိတ်ဝင်စားသူ မည်သူမဆို ကျွန်တော့်ကို Email ပို့ ဆက်သွယ်ပေးပါ.
မြန်မာဘလော့ဂါဖိုရမ်တွင် ကိုမင်းကျော် ရေးသားထားသော ပို့စ်
ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ ဘလော့ဂါညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ အားလုံးအတွက် အထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့ EOT လုပ်ပေးပါမယ်. ဒါကြောင့် လုပ်လိုသူများ အောက်ပါ ကော်မန့်တွင် မိမ်ိဘလော့ဂ်လိပ်စာများ ထည့်ရေးပေးခဲ့ကြပါ. ၁၀ ခုပြည့်တိုင်း တစ်ခါလုပ်ပေးပါမယ်. ကုဒ်ဒင်းတွေကို ဒီပို့စ်ရဲ့အောက်မှာပဲ update လုပ်ပေးပါမယ်. မိမိဘလော့ဂ်ရဲ့ Template ထဲကိုတော့ မိမိဖာသာ ကူးပြောင်းထည့်ပေးစေလိုပါတယ်.
ပထမအသုတ်အတွက် အောက်ပါဘလော့ဂါများကို EOT လုပ်ပေးလိုက်ပါပြီ.
(၄) Mr. Pooh
(၁၁) မျိုးသော် (သို့) ချစ်သူ
ဒုတိယအသုတ်အတွက် အောက်ပါဘလော့ဂါများကို EOT လုပ်ပေးလိုက်ပါပြီ.
(၁) Chit Lay Pyay
(၂) Mogok Media
(၃) Thet Oo
(၁၂)မယ်လိုဒီမောင် (English Blog)
ဒီအောက်မှာ ရေးထားတဲ့ ကုဒ်ဒင်းလေးတွေကို မိမိဘလော့ဂ်ရဲ့ Template ထဲမှာ ထည့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ ဘယ်နေရာမှာထည့်ရင် ပိုအဆင်ပြေနိုင်မလဲ ဆိုရင်တော့
Tag အဖွင့်နား အဆင်ပြေတဲ့ တစ်နေရာရာမှာ လိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ပြန်ပြီးတော့ Edit လုပ်ချင်ရင်လည်း အလွယ်တကူ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်တာပေါ့ဗျာ။
Template ထဲကို ဘယ်လိုထည့်ရတယ်ဆိုတာကို အသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ ကျွန်တော်ရေးထားခဲ့တဲ့ EOT လုပ်နည်းပို့စ် နောက်ဆုံးအပိုင်းလေးတွေကို သွားဖတ်လိုက်ပါခင်ဗျာ...
အဲဒါလေးထည့်ပြီးရင် Template ကို Save လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးပါပြီ။ </style> မပါပါဘူးနော်။ ကျန်ခဲ့တယ်လို့များထင်ပြီး သွားမထည့်ပါနဲ့။ အမှားတွေ ဖြစ်ကုန်ပါလိမ့်မယ်.
<style type="text/css"> ကို မကျန်ခဲ့ပါစေနဲ့နော်. EOT လုပ်ထားတဲ့ ဘလော့ဂ်လေးတွေကို ပြန်စစ်ပေးကြည့်တော့ အဲဒီစာကြောင်းလေး ကျန်နေတာ တွေ့တွေ့နေရလို့ပါ. အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ.
နောက်တစ်သုတ်အတွက် ဆယ်ယောက်ပြည့်တာနဲ့ EOT ဆက်လုပ်ပေးပါမယ် ခင်ဗျာ...
တတိယအသုတ်အတွက် အောက်ပါဘလော့ဂါများကို EOT လုပ်ပေးလိုက်ပါပြီ.
တတိယအသုတ်အတွက် coding တွေကတော့ ဒီလိုပါ. အပေါ်က coding တွေနဲ့ ကွဲပြားရတာကတော့ link ယူတာတွေ သိပ်များပြီး googlepages ဒေါင်းသွားမှာစိုးလို့ပါ. နောက်တစ်ခုနဲ့ ပြောင်းတင်ပေးလိုက်တာပါပဲ.
Posted By Yan 73 Comments
ဒါပေမယ့် ဒုတိယရယ်သံကတော့ ငါမဟုတ်ဘူး
ငါမရယ်ဘဲ ဒီရယ်သံက ထွက်လာစရာ အကြောင်းမရှိ
ဒါဆိုရင်တော့ ငါမဟုတ်တဲ့ ငါကို ဖန်တီးနိုင်လိုက်တဲ့
မင်းဦးနှောက်ထဲက ပွက်နေတဲ့ လှိုင်းတွေကို ခဏတားလိုက်စမ်း…
ရင်ဘတ်ထဲက အသံကို ခဏနားထောင်ကြည့်…
ဒါပေမယ့် ငါ့ခြေထောက်အကြောင်း ကောင်းကောင်းသိနေတယ်.
ဒီဖိနပ်အဟောင်းလေးကို လွှင့်ပစ်ဖို့ မဟုတ်ဘူး
ဒီအသစ်ဆိုတာမလိုအပ်ခဲ့ရင် အဟောင်းတွေပဲ ပုံနေမှာပေါ့နော်.
သေဆုံးခြင်းမှာလည်း ဂုဏ်သိက္ခာတွေ ရှိနေတာပဲ.
မနေ့က အသစ်တွေ ဒီနေ့ ဟောင်းကုန်ပြီ.
ဒီနေ့ အသစ်တွေ မနက်ဖြန်ဟောင်းတော့မယ်.
မင်းရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်အောင် ကြိုးစားရမှာပဲလေ.
ငါ့မှာ လောလောဆယ် ဂျင်းဘောင်းဘီ တစ်ထည်ပဲရှိတယ်
တစ်နေ့ ငါသူ့ကို ခွဲခွာသွားရမှာပါ.
ဒါမှမဟုတ် သူငါ့ကို ခွဲခွာသွားမှာပေါ့
လောလောဆယ် ငါဝတ်နေသမျှ ကာလပတ်လုံးမှာ
ငါသူ့ရဲ့ ဟောင်းနွမ်းမှုလေးကို ပြက်ရယ်မပြုဘူး
မင်းလုပ်နေတာက ဘယ်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်ရင်
မင်းဟာ လောကကြီးရဲ့ ဟာမိုနီကို လေးစားဦးညွှတ်နေသူပဲလေ…
ခေတ်နဲ့အညီနေထိုင်ပြီး အတွေးအခေါ်က ရေပုပ်အိုင်ဖြစ်နေပြန်ရင်လည်း
မင်းကိုယ်မင်း လစ်ဘရယ်လို့ ပြောဦးမှာလား
ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တစ်စုံတစ်ရာကို တားဆီးတုံ့ပြန်တဲ့ တစ်စုံတစ်ခု
လုပ်ပဲလုပ်လိုက်တာ. ဘာမှ အကျိုးဆက်ကို မမျှော်လင့်ဘူး
မင်းရင်ထဲက အမှန်တရားကို မင်းဘယ်တော့မှ တွေ့မှာ မဟုတ်ဘူး
မင်းဟာ မင်းအတ္တနဲ့ပဲ တစ်ချိန်လုံး လုံးပမ်းနေသူ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်.
လူတွေက မှန်ချပ်တွေရဲ့ နောက်မှာ ကိုယ်စီရှိနေကြတယ်လေ.
ဒါကြောင့် သူတို့တွေ မျက်စိတွေကျိန်းနေကြတာပေါ့
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ မှန်ချပ်ကို ဘေးမချဘဲ သူများရဲ့ မှန်ချပ်တွေကို အပြစ်တင်နေကြတယ်.
မင်းဘက်ကတော့ စပြီး ပြောင်းလဲပေးလိုက်လေ.
အဓိကက မင်းရဲ့လုပ်ရပ်ကို မင်းယုံကြည်နေဖို့ပဲ
ခေါင်းကိုမော့ပြီး ငါ့ရင်ဘတ်ထဲက နှလုံးသားကို ကိုင်မြှောက်လိုက်တယ်.